‘बैङ्किङमा राजनीतिक प्रभाव अस्वीकार्य’ -अर्थमन्त्री डा. खतिवडा – जागरणको लागि समाचार
‘बैङ्किङमा राजनीतिक प्रभाव अस्वीकार्य’ -अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं , असोज ७ गते। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैङ्किङ प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन् । न्यू बिजनेश एजले राजधानीमा आयोजना गरेको पाँचौं ‘न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड २०१८’ को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।